Giriigga oo deyn iska bixiyay | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Giriigga ayaa iska bixiyay deyn muhiim aheyd oo gaareysa 3.8 biliyan ah oo doolar taasi uu siiyay bangiga dhexe ee Yurub.
Bixinta deynta ayey suurgashay kaddib markii guddiga beesha Yurub ay la saxiixdeen arbacadii Athens heshiis lacag siin hor leh, taasi oo bilo wadaxaajoodyo adag qaadatay.
Deynta oo qiimaheedu tahay 95 bilyan oo doolar ayuu taa badalkeeda Giriiggu ballanqaaday inuu hirgeliyo dib u qaabeyn dhaqaale oo dheeri ah.
Heshiiska ayuu ra’iisul wasaaraha Giriigga, Alexis Tsipras, geliyay inuu wajaho kala qeybsanaan ku timaada xisbigiisa Syriza.
Wararka ayaa sheegay inuu la kulmi doono la taliyayashiisa si uu ugala tashado hadii lagu dhawaaqayo doorasho dhaw.